Home Wararka Doorashada Madaxweynaha oo loo qorsheeyay in ay dhacdo bisha Janaayo 2022
Doorashada Madaxweynaha oo loo qorsheeyay in ay dhacdo bisha Janaayo 2022
Sida MOL ay u xaqiijiyeen ilo ku dhaw Villa Soomaaliya, Farmaajo iyo Rooble ayaa sida wadajira uga shaqeeynaya in Doorashada Madaxweynaha la jiido ilaa laga gaaro bisha Janaayo ee sanadka soo socda taas oo Farmaajo siinayso halkii sano ee uu horay u doonayay in uu ku darsado waqti xileedkiisa.
Sida ka muuqatay Jadwalka doorashada ay dhawaan soo saareen gudiga doorashooyinka Qaran, laguma soo hadal qaadin waqtiga ay dhacayso doorashada madaxweynaha, waxaa kaliya oo lagu sheegay in doorashada labada aqalka ay soo gabagoobayso bisha Octoobar.
Sida looga bartay doorashooyinka dalka horay uga soo dhacay, doorashada madaxweynaha oo kaliya ayaa u bahan in kabadan 45 cesho. Waxaan shaki ku jirin in Qorshaha Farmaajo oo uu gadaal ka taagan yahay Rooble ay tahay in la jadiido doorashada si ay labaduba xukunka ugu sii nagaadaan.
Dhanka kale , Midowga Musharaxiinta ayaa waxa ay dib u noqdeen dhaqankoodii baraal soo saarida oo markastaa ku soo dhamaaday “waxaan walaac ka muujinaynaa, waxaan ugu baaqaynaa .” iyo waxa la mida. Farmaajo ayaana inta badan dhagaha ka furaysta catoowga iyo baaqa ka soo baxo musharaxiintaas.